★မြန်မာ့အလင်း★: မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ စိတ်ထား နဲ့ ဘယ်လိုပြောဆိုရမလဲ?
ကျုပ်တို့ မြန်မာတွေက မွတ်ဆလင်နဲ့ စကားပြောရင် အားနာတယ်။ အိညှက် အိညှက် လုပ်ပြီး ပြောတယ်။ သူတို့ လိမ်သမျှ ယုံပါတယ်။ ကုလား မျက်ရည်ကျပြရင် သနားတတ်ပါတယ်။ ကုလားကို အဲလို ဆက်ဆံလို့မရဘူး။ ဒီကောင်တွေက စေတနာကို အရမ်းစော်ကားတယ်။ အားနာတာကို ကြောက်တယ်လို့ ယူဆတယ်။ သနားတာကို စိတ်ဓါတ်ပျော့ညံ့တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျုပ်တို့ နိုင်ငံမှာ မွေးပြီးတော့ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံအပေါ်မှာ သစ္စာထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို မကောင်းပြောတယ်။ အပုတ်ချတယ်။ ကျုပ်တို့ လူ့ဘောင်ကိုလည်း ဖျက်ဆီးတယ်။သူတို့ စိတ်ထားကို မရှက်ပဲ တခြားမြန်မာတွေနဲ့ အခွင့်အရေး အတူတူ ပေးဖို့ တောင်းဆိုရဲတဲ့ကောင်တွေဟာ ရှက်စိတ် ဘယ်လောက် ကင်းမဲ့နေလည်း မှန်းစ နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာတွေက အချင်းချင်းပဲ သတ္တိုရှိနေတဲ့ အကျင့်တွေ ဖျောက်ဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။ မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ သူတို့ကို ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဆိုတာ Video essay လေး ဖန်တီးပြီး တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
မလေးရှားမှာ ဟိန္ဒူ ဘုရားကျောင်းတွေ မကြာခဏဖျက်ဆီးခံရပါတယ် ။ မွတ်ဆလင်အစိုးရ ဘယ်လောက် အကောက်ကြံလဲဆိုတာ ဗီဒီယိုမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဘာသာတရားစစ်စစ်က ဘယ်တော့မှ အကြမ်းဖက်ပြီး မတုံ့ပြန်ပါဘူး။ ဒီကျောင်းကိုဖျက်တဲ့အတွက် ဘယ်ဟိန္ဒူကမှ မလေးရှားမှာ ဗုံးဖေါက်မှုမလုပ်ပါဘူး။ သူတို့ တုံ့ပြန်မှုက မဲမပေးဘူးဆိုတာပါပဲ။ အဲဒါကို ဘာသာလို့ ခေါ်ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်ကတော့ လူရမ်းကားဝါဒပါ။
မလေးရှားမှာ ခရစ်ယာန်ကျောင်းတွေကို လည်း ဖျက်ဆီးတာ မကြာခဏပါပဲ။ ခရစ်ယာန်တွေ ဒေါသအရမ်းထွက်မယ်ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ ဘာသာရေးဆိုတာ ငြိမ်းချမ်းပါတယ်။ ဘယ်ခရစ်ယာန်မှ အသေခံ ဗုံးခွဲပြီး အပြစ်မဲ့ မလေးရှားတွေကို မသတ်ခဲ့ပါဘူး။ သီချင်းလေးနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး ဆိုပြီး တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေ ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီး ရှက်တတ်ရဲ့လား? မြန်မာလူမျိုး (မြန်မာဆိုတာ ကရင်၊ ကချင်၊ ရှမ်း၊ ဗမာ အားလုံးပါတယ်) ခရစ်ယာန် ညီအစ်ကိုတွေ စိတ်ထားလေးသိဖို့ ဒီဗီဒီယိုလေးလဲကြည့်စေချင်ပါတယ် ။
ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကျောင်းလဲ မလေးရှားအစိုးရက ဖျက်ခဲ့ပါတယ်။ ဆင်းတုတော်တွေပါ အမှိုက်လို လုပ်ပြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ မိုဟာမက်ကိုယ်တိုင် တခြားဘာသာကို ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ တခြားဘာသာရဲ့ ဆင်းတုတော်တွေကို ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ အခုလိုလုပ်ရပ်အတွက် မွတ်ဆလင်တွေ မကန့်ကွက်တာ မထူးဆန်းပါဘူး။
သူများဘာသာကို စော်ကား၊ ဖျက်ဆီးခဲ့ပေမယ့် သူတို့ဘာသာနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဆတ်ဆတ်ထိ မခံပါပဲ။ ၀က်ဝံရုပ်ကလေးကို မိုဟာမက်လို့ နာမည်ပေးခဲ့တာ ကျောင်းဆရာမက လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါ မွတ်ဆလင်ဘာသာ ဆော်ကားတယ်လုိ့ သတ်မှတ်ပြီး ထောင်ချပါတယ်။ ကုလားတွေကတော့ သတ်ပြစ်ဖို့အထိ တောင်းဆိုပါတယ်။ သည်းခံ ခွင့်လွှတ်မှုဆိုတာ မွတ်ဆလင်မှာလုံးဝ မရှိပါဘူး။ ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်လဲ မရှိပါဘူး။ (တကယ်တော့ ချေးစားနေတဲ့ ခွေးကို မိုဟာမက်လို့ နာမည်ပေးရမှာ မဟုတ်ပါလား?)
မွတ်ဆလင် လူနည်းစု လုပ်ရပ်ကို သိမ်းကျုံးမပြောဖို့ ကုလားတွေက အမြဲ ပြောဆိုတတ်ပါတယ်။ Fox က အဖိုးကြီးပြောတာ အရမ်းမှန်ပါတယ်။ သန်းတစ်ထောင်လုံးရှိတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေ တစ်ယောက်မကျန် ဆရာမကို သတ်ဖို့ တောင်းဆိုမှ မွတ်ဆလင်တွေ အားလုံးရဲ့ ဆန္ဒလို့ မှတ်ယူရမှာလား? ဘယ်မွတ်ဆလင်ခေါင်းဆောင်မှ တရားဝင် မကန့်ကွက်ပါဘူး။ ဆရာမကို သတ်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့သူတွေကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာ မွတ်ဆလင် အားလုံးရဲ့ ဆန္ဒကို ရောင်ပြန်ဟပ်နေပါတယ်။ ကျုပ်တို့မြန်မာတွေ စကားပြောရင် အဲဒီအဖိုးကြီးကို အတုယူသင့်တယ်။
မွတ်ဆလင်နဲ့ စကားပြောရင် Boortz လို ပြတ်သားပြီး ရဲရဲရင့်ရင့်ရှိဖို့ လိုပါတယ်။ အဖြူတွေ ဆီက အတုယူရမှာ ဘာဂါစားဖို့နဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်ဖို့ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့နဲ့တူအောင် ဆံပင် ကို အရောင်ဆိုးဖို့လဲ မလိုပါဘူး။ စကားလုံးလှလှလေးတွေနဲ့ တိုင်းပြည်ကို လိမ်ညာ အုပ်ချုပ်တဲ့ နည်းလဲ မလိုပါဘူး။ အခုလို ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောဆိုတာကိုတော့ အတုယူစမ်းပါဗျာ။ မွတ်ဆလင်ကို အခုလို ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောမှ ရတယ်ဗျ။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 9:46 AM
မွတ်ဆလင်ဝါဒဟာ မြင့်မြတ်တဲ့ ၀ါဒ သူတော်စင်တွေနဲ့ အတူ ယှဉ်ပြိုင်ပေါ်လာတဲ့ မိစ္ဆာအယူဝါဒ သာ ဖြစ်တယ် .. computer မှာ program ရှိသလို ၄င်း program နှင့် အလားတူ ယှဉ်တွဲပေါ်လာတဲ့ Virus တစ်မျိုးရှိသကဲ့သို့ ပင်ဖြစ်တယ်၊ Jesus Christ, Buddha တို့ကို သူတော်စင်အဖြစ်ဖြင့် လက်ခံနိုင်ပါ၏။ အလားတူ ၄င်းတို့၏ ၀ါဒနှင့် ကျင့်ကြံ ပြုမူမှုကိုလဲ သူတော်ကောင်းဝါဒအဖြစ် လက်ခံနိုင်ပါ၏၊ သို့သော် သူတပါး ကို နှိပ်စက်ညှင်းပန်း အစွန်းရောက် မှောင်မိုက်နေသော ၀ါဒနှင့် အယူအဆများကို ဘယ်သို့ဘယ်ပုံ ဘာသာတရားတစ်ခု အနေနှင့် လက်ခံနိုင်ပါမည်နည်း။